Ogaden News Agency (ONA) – Kacaan mucjisa ah ayuu ahaa
Kacaan mucjisa ah ayuu ahaa
Shabakada Ethiopian Review oo afgka mucaaradka Amxaarada ku hadasha ayaa ku tilmaantay isbadalka ka dhacay Adisababa oo R/wasaare loogu doortay Hailemariam Desalegn oo ah ree Wolaita iyadoo Mekonnen oo Amxaara ah looga dhigay ku-xigeen inay tahay kacaan si mucjisa ah ku yimid, taasoo uu ku sheegay inay soo afjartay riyadii ahayd in Tigreega uu xukunka dalka haysto 50ka sano ee soo socota. Waxay intaa raacisay inuusan marnaba sidaa moodaynin inay u dhici doonto Meles Zanawi. Qorshaha Meles wuxuu ahaa inuu 2015ka ka fadhiisto siyaasadda inta ka horeysana uu afadiisa ku hubsado R/Wasaarenimada oo sidaa uu dalka uga xukumo albaabka gadaashiisa isagoo dagan oo ku raaxaysanaya qasriga uu ku baxay 100 milyan ee birr oy ka dhex dhisteen madaxtooyada. Waxaa sidaa ku gubtay ayay tidhi shabakadda –Xukunkii Qoyska- ay qorsheeyeen ka dib markuu u yimid Meles Zanawi cudur aan la garanaynin bilihii May ama June.
Sikastaba ha ahaatee, waxa ka dhacay Itobiya maanta ayaa ah arin mucjisa ah, sababtoo ah waxaa 2ba todobaad gudohoodl meesha ka baxay oo dhintay R/wasaarihii iyo wadaadkii uu soo xushay ee Kaniisada loo dhiibay suu ugu barakeeyo talaaba kastoo uu qaado. Dhimashada 2daa nin ayay ku tilmaantay shabakada inay fursad cusub u furtay Itobiya, waxaana la dhowrayaa talaabooyinka uu qaadi doono Hailemariam maalmaha soo socda.
Si xukunka looga wareejiyo TPLF oo qayb ka ah EPRDF waxaa ka shaqeeyay oo si fiican ugu guulaystay Bereket Simon ka dib markuu horey u cunay Meles 2010kii ruug-cadaagii ururka TPLF ee arintaa baajin lahaa sida Sebhat Nega iyo kuwa kale oo siyaasiyiin ahaa. Inay xukunka ku soo noqdaan TPLF waxaa ishortaagay Bereket Simon oo u gogol xaadhay Hailemariam inuu jagada qabto, isagoo ku guulaystay inuu taxaaluf adag u sameeyo garabyada kalee ANDM, SEPDM iyo OPDO.
Waxaa sidoo kale qayb fiican ka qaatay arintaa oo ku taageeray Dawladda Mareykanka oo la safnaa Hailemariam. Xafiiska ciidanka Mareykanka ee Africom ayaa culays badan saaray Jeneraalada Tigreega oo xatooyo badan lagu hayo inay faraha kala baxaan arimaha siyaasadda haddii kale ay waayi doonaan hantida faraha badanee ay ku leeyihiin Mareykanka, iyadoo waliba qaar badan ay xaasaskooda iyo caruurtoodaba dagan yihiin Mareykanka oy dugsiyo kaga jiraan halkaa.
Waxay ku soo gunaanaday shabakadda ER oo ku hadasha afka mucaaradka Amxaarada, yaynaa iloobin in TPLF ay qorshaynayaan inay ka goostaan Itobiya oy abuuraan – Tigree Weyne – ‘Greater Tigray.’
Waxaa ka socda Itobiya isbadal xoogan oo dusha ka qarsoon, marka isha halagu hayo, gaar ahaan siday u fikirayaan kuwa mucaaradka sheeganaya.